Nyowani Patent: Liquid Metal Apple Tarisa | Ndinobva mac
Iyo Apple Watch ndeyangu imwe yeakanakisa Apple madivayiri. Zvinondibatsira zvakanyanya mumabasa angu ezuva nezuva uye ikozvino zvatakavharirwa kumba mubatsiri akanaka ku ndipindure kuti ndivhare madenderedzwa uye ndiwane kurovedza muviri zuva nezuva. Izvo hazvimire kuvandudza uye iyi nyowani patent inoyambira kuti isu tinogona kuona iyo Apple Watch ine zvinoshamisa zvinhu. Liquid Metal nemapolymer akasiyana.
Iyo Apple Watch yakagadzirwa neLiquid Metal yemhando yepamusoro uye maPolymers kune mamwe ese
Apple yasiyanisa mhando mbiri dzeApple Watch kubva pakutanga. Imwe yekirasi yepamusoro inogadzirwa mu zvimwe zvekutanga zvigadzirwa uye mamwe emhando yepasi. Ikozvino, zvemukati zvakangofanana mune yega yega mamodheru, kunyangwe mune yakasarudzika Hermés.
Iine iyo patent nyowani inofungidzirwa kuti epamusoro-magumo mamodheru anogona kugadzirwa mune nyowani zvinhu. Hapana chimwezve uye hapana chakaderera pane Liquid Metal kana izvo zvinouya zvakafanana, amorphous girazi. Asi Liquid Metal inonzwika zvirinani.
Haisi nguva yekutanga kunzwa kuti Apple iri kuseri kwekushandiswa kweLiquid Metal yechero ipi yemidziyo yako. Takambokuudza makore mashoma apfuura, iko kushandiswa kwavangaise chinhu chitsva ichi.
Pamamodeli epasi, mapolymer akasiyana angashandiswa izvo zvaizoita kuti zvikwanise kuumba zvirinani uye kugadzira mamwe akasarudzika mamodheru ane mamwe matsva dhizaini uye zvakanyanya kukosha, izvo zvinogona nani kupinza zvinotyisa.
Iyo Polymer zvakare chinhu chakachipa nacho icho, ini ndinoshuva, kuti tikwanise kuona yakakosha Apple Watch Zvishoma zvakachipa.
Sezvatinogara tichitaura patinotaura nezve patent, zvinokwanisika kuti iyi nhau usazadzike asi kwenguva iyo pfungwa iripo uye inobatika, asi isu tinotenda kuti zvinotora nguva yakareba kuti iburitswe kutengeswa, kana zvikazoitika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Nyowani Patent: Liquid Metal Apple Watch
Dropbox beta ye macOS ikozvino inoita kunge iCloud